आफू भन्दा धेरै कान्छी उमेरकी केटी विवाह गरेका चर्चित सेलिब्रेटी जोडीहरु…. – Khabar Patrika Np
आफू भन्दा धेरै कान्छी उमेरकी केटी विवाह गरेका चर्चित सेलिब्रेटी जोडीहरु….
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ २६, २०७८ समय: १८:३५:२३
कसै कसैले यति सानो उमेरको श्रीमती ल्याउछन्, समान्य मानिस देखि राजनीतिज्ञ या सेलिब्रेटीहरुले पनि आफू भन्दा धेरै कान्छी उमेरकी केटी विवाह गरेको पाइन्छ । अझ खाईलाग्दो ज्यान, आर्कषक व्यक्तित्व, अभिनयमा अब्बल, अभिनेताहरुका बढी महिला फ्यानहरु हुन्छन् । विपरित लिङ्गप्रतिको आकर्षणले अभिनेताहरुसँग नजिक हुन खोज्नेहरु युवतीहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
स्टारडमका कारण हुन सक्छ वा अन्य केही कारण, कम उमेरका कतिपय युवती अभिनेताका लागि मरिमेट्छन् । त्यसैले अभिनेताहरुलाई निकै कम उमेरकी युवती सहजै मिल्छन् ।महानायक राजेश हमाल हुन् वा दशकौँ देखि सिनेमामा सक्रिय भुवन केसी ।आधा शताब्दीको उमेर पार गर्दासमेत उनीहरुप्रति दशकौँ कम उमेरका युवतीहरु आकर्षित हुन्छन् ।
भुवन केसीले आफ्नो छोरीको उमेरकी युवती जिया केसीसँग केही बर्ष अफस्क्रिन रोमान्स गरे । तर उनले आफ्नो रोमान्सलाई विवाहमा परिणत गरी सकेका छैनन् ।हेर्दै जाउ उनीहरुको विवाह होला की नहोला ।भुवन केसीले अहिले नै कम उमेरकी युवतीसँग विवाह नगरेपनि अन्य केही अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरुले दुई दशक भन्दा धेरै कान्छा वा जेठासँग विवाह गरेर घरजम गरेका छन् ।
विवाह भन्दा पहिले महानायक राजेश हमाललाई चाहने युवतीहरुको कमी थिएन । यसैलाई बुझेर पनि हुनसक्छ उनले झण्डै ५० वर्षको हाराहारीमा विवाह गरे ।उनको स्टारडमकै कारणले हुन सक्छ उनी भन्दा झण्डै तीन दशक कान्छी युवतीले उनलाई प्रेममा पारीन् । मोडल मधु भट्टराईसँगको प्रेमलाई राजेशले विवाहमा परिणत गरे । राजेश हमालको जन्म वि सं २०२१ सालमा भएको हो । अहिले उनी ५२ वर्षको वरिपरि छन् । मधु अहिले ३० वर्षमा हिँड्दै छिन् । यस हिसाबले राजेश र मधुबीचमा झण्डै २२ वर्षको फरक छ । उमेरमा धेरै फरक हुँदा वैवाहिक जीवनमा बिभिन्न कठिनाई आउने भोग्नेहरु बताउँछन् ।तर, राजेश र मधुको जोडि भने एकअर्काको साथ पाएर निकै खुसी छन् ।
लुटका निर्देशक निश्चल बस्नेतले पनि आफूभन्दा १४ वर्ष भन्दा बढी कान्छी उमेरकी स्वस्तीमासंग विवाह गरेका छन् ।एकअर्काको साथमा रमाउन सक्यो भने उमेरले केही पनि फरक पार्दैन भन्दै यो जोडी अघि बढिरहेको छ । एकअर्काको उमेरमा भएको अन्तरले कुनै पनि समस्या नपरेको भन्दै यो जोडी आजको मितिसम्म खुशी छन् ।आफ्नो वैवाहीक सम्बन्धको बारेमा उनीहरुले मिडियासँग पनि धेरै पटक भनिसकेका छन् । नायिका स्वस्तीमा २१ बर्षकी भइन् भने निश्चल ३४ वर्षका भए । निश्चल करिअरमा सफल र स्थापित भईसकेका छन् भने स्वस्तीमा करिअको सुरुवातमै छिन्।हेरौँ उनीहरुको वैवाहीक सम्बन्ध अगाडि कसरी बढ्छन् । हामी चहान्छौँ उनीहरुको सम्बन्ध दीगो र बलियो होस् ।
करिअरको सुरुवातमै विवाह गर्ने अभिनेत्री हुन् रेखा थापा । सिनेमा हिरोबाट सिनेमामा प्रवेश गरेकी उनलाई त्यहि सिनेमाले जीवन साथी भेटाईदियो । त्यहि सिनेमाका निर्माता छविराज ओझासँग उनको विवाह भयो । विवाह गरेर केही समय पछि नै रेखालाई छविको साथले स्थापित गराईदियो ।उनी अभिनेत्रीका साथै निर्मात्री पनि भईन् । दिनप्रतिदिन उनको करिअर सफल हुँदै गए तर वैवाहिक जीवन भने असफलतातिर धकेलियो ।एकअर्काको मन अनि विचार मिल्न छाडेपछि उनीहरुले एउटै छानामुनी नबोलेरै केही वर्ष गुजारे । हाल उनीहरु कानुनी रुपमै अलग भईसकेका छन् । रेखा र छविको उमेरमा १८ बर्षको अन्तर थियो ।
५४ वर्षिय छवि अहिले आफूभन्दा आधा उमेरकी अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलसँग विवाह गर्ने प्रसंगले चर्चामा छन् भने ३२ बर्षिय अभिनेत्री रेखा राजनीतिमा प्रवेश गरेर चर्चामा छिन् ।
बहुविवाह र कान्छी उमेरको श्रीमती ल्याउने अभिनेता मध्ये अर्का अभिनेता हुन शिव श्रेष्ठ । उनले गंगादेवि श्रेष्ठसंग २०२८ सालमा झ्याई पारे पनि लामो समयसम्म सम्बन्ध टिक्न सेकन । अन्तत : उनले चितवन रामनगरकी श्रृजना श्रेष्ठ संग विवाह गरे । उनकी कान्छी श्रिमती शिव भन्दा २२ वर्ष कान्छी छिन् । हुन त भन्नेहरु भन्छन् माया प्रेम र विवाहमा उमेर जातपात धर्म भुगोलले असर गर्दैन । तर अर्का थरीको तर्क भने यस्ले ठूलो अर्थ लाग्छ भन्ने छ । जे होस् विवाह पछि कस्ले कती त्याग र समझदारीता दर्साउछ त्यसले विवाह पछिको जीवन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निक्र्यौल गर्छ ।